Otu esi etinye "ñ" na keyboard Android | Androidsis
Otu esi etinye «ñ» na keyboard Android
Ụlọ Ignatius | | Nkuzi
Akwụkwọ ozi ñ bụ otu n'ime nke kacha anọchite anya Spanish. Enweghị ñ, anyị ga -ekwu maka ya espanol anyị ga -ebikwa Espana, na -ekwu naanị okwu ụfọdụ sitere n'aha asụsụ ahụ. Ọ bụrụ na ịzụtara ekwentị ọhụrụ na enweghị ike ịhụ leta or ma ọ bụ na ọ fuo n'otu ntabi anya, ebe a ị ga -ahụ ngwọta ya.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata otu esi etinye akwụkwọ ozi ñ na ahụigodo AndroidN'isiokwu a, anyị ga -egosi gị nhọrọ niile gam akporo na -enye anyị ka anyị nwee ike weghachite ya, ebe ọ bụrụ na ọ dịghị ma ọ bụ fuo, ọ nweghị ike ịbụ naanị maka otu ihe kpatara ya.
1 Gịnị kpatara na mkpụrụedemede ñ adịghị na keyboard Android m
2 Otu esi etinye «ñ» na keyboard Android
2.1 Gbanwee asụsụ smartphone
2.2 Tinye ahụigodo Spanish na ekwentị gam akporo
2.3 Tụgharịa n'etiti igodo asụsụ dị iche iche na gam akporo
Gịnị kpatara na mkpụrụedemede ñ adịghị na keyboard Android m
Dịka m kwuworo n’elu, enwere ọtụtụ ihe kpatara na mkpụrụedemede ñ nwere ike puru na keyboard anyị ma ọ bụ na ọ gaghị adị Anyị ewepụtala ya n'igbe wee hazie ya.
Akwụkwọ ozi ahụ bụ ñ na, n'agbanyeghị na ọ dị ịtụnanya Ọ bụghị naanị Spanish, banyere Royal Academy of Language na 1803 na mmalite ya sitere na emepechabeghị emepe. Na mgbakwunye na achọtara ya n'asụsụ Spanish, anyị na -ahụkwa ya n'asụsụ Galician na Asturian, yana n'ọtụtụ asụsụ asụsụ Latin America nke ndị ọkà mmụta asụsụ si alaeze Spain rutere.
Ihe mbụ mere na ahụghị mkpụrụedemede on na keyboard Android bụ maka asụsụ nke smartphone abụghị Spanish. Ekwentị niile na -abata n'ahịa site na ụlọ ahịa ndị mbụ, ha na -abata n'asụsụ bekee. Ọ bụrụ na anyị agbanweghị asụsụ n'oge usoro nhazi, a ga -egosipụta ahụigodo na Bekee, yabụ, mkpụrụedemede ñ agaghị apụta.
Ihe ọzọ kpatara na ahụghị mkpụrụedemede ñ na keyboard Android, bụ n'ihi anyị etinyeghị ahụigodo spanish gaa na ndepụta igodo igodo dị.
Ọ bụrụ na anyị ahazi ihe karịrị otu keyboard na ama anyị ma na mberede akwụkwọ ozi ñ apụọla, ọ bụ n'ihi na anyị amaghị na anyị agbanwela asụsụ igodo ahụ.
Gbanwee asụsụ smartphone
Oge izizi anyị ahazi ama, ozugbo anyị gbanyere ya ma ọ bụ mgbe anyị weghachi ya site na ọkọ, ihuenyo mbụ gosiri na -akpọ anyị òkù ka ịhọrọ asụsụ nke ama anyị. Ọ bụrụ na anyị họrọ asụsụ na -abụghị Spanish, a ga -egosipụta menu niile n'asụsụ ahụ.
Na mgbakwunye, ọ ga -arụnye ahụigodo asụsụ naanị na anyị ahọrọla. Buru n'uche na asụsụ smartphone anaghị ejikọ asụsụ keyboard ahụ mgbe niile.
Ezie na anyị nwere ike ịwụnye ahụigodo dị iche iche na ama (ọ bụrụ na anyị na -ejikarị asụsụ dị iche iche mgbe anyị na -ede ihe) anyị enweghị ike ịwụnye ihe karịrị otu asụsụ na ama, ya bụ, na menus, n'agbanyeghị na anyị nwere ike ịgbanwe ya.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ gbanwee asụsụ nke ekwentị anyị site na Bekee gaa Spanish, anyị ga -emerịrị usoro nke m gosiri gị n'okpuru.
Ihe mbụ niile bụ ịbanye na faịlụ Ntọala nke ngwaọrụ.
Ọzọ, anyị ga -achọ menu Asụsụ & ntinye (Asụsụ)
N'ime Asụsụ & ntinye (Asụsụ), pịa ọzọ Asụsụ wee banye Tinye asụsụ ntinye/ Tinye asụsụ.
Ọzọ, anyị na -achọ Spanish anyị chọrọ iji. Buru n'uche na Spanish nke si Spain abụghị otu Spanish si Mexico, na Spanish nke Argentina, na Spanish nke United States ... Ọ dị mkpa ịhọrọ nke kwekọrọ na obodo anyị, ebe asụsụ ọ bụla nwere akwụkwọ ọkọwa okwu dị iche, n'agbanyeghị na n'asụsụ Spanish ọtụtụ okwu pụtara ma dee ya otu.
N'oge ahụ, a ga -ebudata asụsụ a na akpaghị aka na ama anyị na, ozugbo ahọpụtara, a ga -agbanwe asụsụ nke smartphone anyị.
Tinye ahụigodo Spanish na ekwentị gam akporo
Anyị nwere ike hazie ekwentị anyị ka interface onye ọrụ wee gosi anyị otu asụsụ, n'agbanyeghị na anyị nwere ike ịgbanwe ya ngwa ngwa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị nwere ohere wụnye ahụigodo abụọ ma ọ bụ karịa, nke na -enye anyị ohere ide ihe ọsọ ọsọ n'asụsụ ndị ọzọ.
Ọ ga -enye anyị ohere ide ihe ọsọ ọsọ n'ihi na ihe nlele ahụigodo, dị n'otu asụsụ. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na anyị na -ede ihe n'asụsụ Bekee, na iji ahụigodo na Bekee, onye nhazi ga -agbanwe okwu (ma ọ bụ kpọọ anyị ka anyị mee ya) n'otu asụsụ ahụ ahụigodo ahụ.
Jiri keyboard na -abụghị otu asụsụ anyị na -ede dee ọ bụ isi ọwụwa site na ndozi akpaka. Ozugbo anyị tụlere etu igodo isi si arụ ọrụ, ọzọ anyị ga -egosi gị otu esi etinye keyboard na gam akporo.
Ihe mbụ anyị ga -eme bụ ịbanye na mwube nke ngwaọrụ anyị.
N'ime Ntọala, anyị na -enweta Asụsụ na ntinye ederede.
Na menu a anyị na-ahọrọ Ahụigodo mebere.
Mgbe ahụ anyị họrọ ahụigodo nke anyị na -eji na smartphone anyị. N'ọnọdụ anyị, ọ bụ Google's Gboard.
Usoro maka ịgbakwunye asụsụ ahụigodo ndị ọzọ bụ otu ihe ahụ na ahụigodo ndị ọzọ. Naanị anyị ga -ahọrọ aha ahụigodo dị na enyo nke ga -egosi ozugbo keyboard mebere.
Na -esote, na menu mebere, pịa Asụsụ.
Na-esote, pịa na Tinye ahụigodo.
Mgbe ahụ a depụta ya na asụsụ niile dị. N'ọnọdụ anyị, anyị na -aga ịhọrọ Bekee (United Kingdom).
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ iji interface ntinye data ọdịnala, na nke a QWERTY, pịa Emela.
Ugbu a, anyị ga -amata otu anyị nwere ike ịgbanwee n'etiti igodo dị iche iche na anyị arụnyere na ngwaọrụ anyị.
Tụgharịa n'etiti igodo asụsụ dị iche iche na gam akporo
Na ngalaba nke mbụ akọwara m otu anyị nwere ike tinye igodo asụsụ dị iche iche na ama. Nke a na -enye anyị ohere iji ihe nrụzi akpaka maka asụsụ ọ bụla ma ghara ikwenye na edere nke ọ bụla n'ime okwu ndị anyị dere.
Ọ bụ ezie na usoro maka ịtinye ahụigodo nwere ike ịdị mgbagwoju anya ma ọ bụ karịa, ụzọ maka ịgbakwunye ahụigodo ịgbanye n'etiti igodo igodo dị mfe na ngwa ngwa, ebe ọ bụ na ọ bụghị, ọ gaghị aba uru ọ bụla.
Na agbanyeghị ma anyị na-eji ahụigodo Gboard nke Google ma ọ bụ ahụigodo nke atọ ọ bụla, usoro ịgbanwere n'etiti asụsụ bụ otu. Ka ịgbanwee n'etiti igodo, anyị ga -enwerịrị pịa na ụwa nke dị n'akụkụ aka nri nke oghere oghere.
Anyị nwekwara ike pịa ma jide akara ngosi ahụ ka a na -egosipụta asụsụ niile etinyere ahụigodo na ngwaọrụ ahụ.
Ozugbo anyị gbanwere asụsụ, n'ime oghere oghere a ga -ebu ụzọ gosipụta asụsụ anyị na -eji. Ọ bụrụ na anyị etinyere ahụigodo ahụ n'asụsụ Spanish na Bekee, anyị na-ejikwa ahụigodo n'asụsụ Spanish (yana ñ) Ogwe oghere ga-egosi ES-EN.
Ọ bụrụ na ntụzịaka, anyị na -eji asụsụ Bekee, n'ime oghere oghere, A ga-egosipụta EN-ES. Ọ bụrụ na etinyerela asụsụ ndị ọzọ, na mgbakwunye na Bekee na Spanish, a ga -egosikwa ha na oghere oghere, na -egosi na ebe mbụ ahaziri ahụigodo ahụ n'oge ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Otu esi etinye «ñ» na keyboard Android
Depop: nke a bụ ngwa ejiji ịzụ na ire uwe